U Aye Tha Aung’s words | MoeMaKa Burmese News & Media
HOME Media က တာဝန်ခံ ကိုအောင်ထွန်း နဲ့ မိတ်ဆွေ ၂ ဦး - ပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ ထောင် ၁လ ချမှတ်ခံရ
မြန်မာသဘာဝလူမှုဝန်းကျင် အကျိုးအတွက် TSS Tokyo Water က ဆွေးနွေး
U Aye Tha Aung’s words
ကင်တေးနားခရီးစဉ် ရခိုင် အတွက် အကျိုး မရှိနိုင်ဟု တွေ့ဆုံခဲ့သူ ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြား
သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂
“ ကင်တေးနား ပြောတဲ့စကားတွေ အပေါ်မှာ သုံးသပ်လိုက်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေကြတဲ့ ပြဿနာမှာ ရခိုင် ဒုက္ခသည် တွေ အပေါ်မှာ အာရုံမစိုက်ဘဲ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်တွေ အပေါ်မှာဘဲ အာရုံ စိုက်တာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကင်တေးနား လာတဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ်မှာ ဘကြီးတို့ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး” ဟု ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ကင်တေးနားနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သူ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးအေးသာအောင် က ပြောသည်။
ဦးအေးသာအောင်နှင့် ကင်တေးနားတို့ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံပြီးခဲ့သည်။ သူ့နှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီးနောက် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲလို့ နိရဉ္စရာမှ မေးမြန်းရာမှာ ဦးအေးသာအောင်က အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တေးနားသည် ဦးအေးသာအောင် ယခု ဖြစ်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာအား မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းလျှင် ကောင်းမည်နည်းဟု မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ မေးခွန်းကို ဦးအေးသာအောင်က သမ္မတကြီး ပြောကြားသည့်အတိုင်း ဖြေရှင်းသင့် ကြောင်း ဖြေကြားလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
“တွေ့တာ သုံးလေးရက်ရှိပြီ၊ ရခိုင်ပြည်ကို မသွားခင်က တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘကြီးက အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ပြောထားတဲ့အတိုင်း တဖက် နိုင်ငံက ခိုးဝင်လာတဲ့ သူတွေကို စစ်ဆေး အရေးယူရမယ်။ စခန်းတခုမှာ ထိန်းသိမ်းထားရမယ်လို့ ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
ဦးအေးသာအောင်မှ မစ္စတာ ကင်တေးနားအား ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ခံသမိုင်းနှင့် လက်ရှိ အခြေအနေများကို အသေးစိတ် လေ့လာရန်လိုပြီး အခြေအနေမှန်ကို တိတိကျကျ သိမှ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ ဘကြီး အဓိကပြောတာက ပြဿနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါ နောက်ခံ သမိုင်းတွေကို သိရှိအောင် ချဉ်းကပ် ကြိုးစားဖို့ လိုတယ်။ မဟုတ်ရင် အဖြေမှန်ကို ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေဟာ နိုင်ငံတကာက အဖွဲ့အစည်းတွေ အပါအ၀င် ကုလသမဂ္ဂ အမြင် တွေနဲ့ လုံးဝခြားနားနေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ ရခိုင် လူမျိုးတွေဟာ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ မီးရှို့တာ၊ သတ်ဖြတ်တာကို ခံရတဲ့အကြောင်း၊ စစ်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တလျှောက်မှာတော့ခါ နှစ်ဖက် အပြန်အ လှန် မီးရှို့ဖျက်စီးမှုတွေ ရှိတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျ မှန်ကန်သော အစီရင်ခံစာမျိုး ထွက်လာပါမှ ကမ္ဘာပြည်သူများ အနေဖြင့် အဖြစ်မှန်ကို သိရှိကြမည် ဖြစ် သဖြင့် ၎င်းကဲ့သို့ အစီရင်ခံမျိုးကို ဘက်မလိုက်ဘဲ ရေးသားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံး RWU က မစ္စတာ ကင်တားနားထံ စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့သည်။
2 Responses to U Aye Tha Aung’s words
Maung Myanmar on August 6, 2012 at 12:59 am
မိမိသည်နိင်ငံ၇ပ်ခြား၇ှိcompanyတစ်ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံကျကာတာ၊ Surabaya၊ Java, Makassar, Manado, Bali, Sumatra, Pontianak မြို.များ၊ကျွန်းများသို.company တာဝန်ဖြင့်၂၀၁၂နှစ်စပိုင်းတွင်၂လနီးပါးသွားေ၇ာက်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်ကမိမိအားမည်သည့်နိင်ငံသားလည်းဟု မေးပါက မိမိ၏အကျင့်( နိင်ငံခြားသားများအားမိမိတို.မြန်မာလူမျိူးတွေဟာခေသူတွေမဟုတ်ကြောင်းသိစေလို ခြင်း)အတိုင်းနှစ်လိုစွာ ဖြင့်“ I’m from Myanmar ” ဟုဖြေကြား၇တာကိုကြည်နူး ( pleased ) ကုဏ်ယူ (proud )မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အခုတစ်ကြိမ် Aug 2012 အင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံသို.companyတာဝန်ဖြင့်လာ၇ာမှာတော့အ၇င်တစ်ကြိမ် နဲ.မတူတော့ဘဲ မည်သည့်နိင်ငံသားလည်းဟုမေးပါက “I’m from Myanmar” အစားမိမိအလုပ်လုပ်သည့်တိုင်း ပြည်၇ဲ့အမည်ကိုဘဲသံုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့အင်ဒိုနီး၇ှားနိုင်ငံခြားေ၇းဝန်ကြီး၇ဲ.မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သတိပေးတဲ.မှတ်ချက်၊Bangkok post web site ရဲ.4Aug 2012 မှာဖေါ်ပြတဲ.သတင်း (Jailed Islamist cleric Abu Bakar Bashir threatened to wage war if Myanmar continues to harm Muslim Rohingyas, inaletter to the country’s president Thein Sein seen onawebsite Friday voa-islam.com )၊ အင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံ၇ဲ.TV သ တင်းဠာန “TV ONE ” ၇ဲ. “Muslim Rohingya disbute ( dispute ) warga ( citizen ) illegal Bangladesh ” ခေါင်းစင်နဲ.5 Aug 2012 9pm သတင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းတွေကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.ဆွေးနွေးနေတာတွေတွေ.၇ပါတယ်။အဲဒါတွေကြောင့်မိမိအနေနဲ.ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေသင်.တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မိပါတယ်။
မိမိအနေနဲ.စာဖတ်သူများကိုမြန်မာလိုဖတ်စေချင်တဲ.အတွက်မြန်မာ font ကိုမြန်မာလိုကြိုးစားပြီး type ၇ိုက်၇တဲ.အတွက်စာလုံးပေါင်းအခိူ.မှန်ကန်စွာမ၇ိုက်နိုင်တာကိုခွင်.လွှတ်ပါ။
Maung Myanmar on August 6, 2012 at 4:14 pm
အလျင်းသင့်လို.အင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံနဲ.သူတို.လူမျိူးတွေ၇ဲ.အကြောင်းမိမိအတွေ.အကြုံကိုခြေခံပြီးတင်ပြပါ၇စေ။၂၀၁၂နှစ်စပိုင်းတွင်companyတာဝန်ဖြင့်အင်ဒိုနီး၇ှားနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွား၇မယ်ဆိုတာသိ၇တော့မသွားခင်မှာလူ.သဘာဝအ၇စိတ်လှူပ်၇ှား(ကြောက်တာလဲပါပါတယ်။)မိပါတယ်။အများသိတဲ့အတိုင်းအထူးသဖြင့်အင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံ၇ဲ. 12 October 2002 Bali nightclub attacksဟာလူတွေကိုအထူး တုန်လူပ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ.အင်ဒိုနီး၇ှားနိုင်ငံကိုေ၇ာက်ေ၇ာက်ခြင်း၎-၅၇က်မှာစိတ်ကမ၇ဲတ၇ဲတ၇ဲ နဲ.စိုး၇ိမ်မှူလေးတွေ၇ှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆယ်၇က်-နှစ်ပါတ်ခန်.သူတို.လူမျိုးတွေနဲ.ထိတွေ. ဆက်ဆံ့ ကြည်.တဲ့အခါမှာအများစုသောသူတို.လူမျိုးတွေဟာဖော်ေ၇ွကြပြီးနှစ်နှစ်လိုလိုကူညီချင်တဲ့စိတ်တွေ၇ှိကြတာ ကိုမထင်မှတ်ဘဲအံ့သြဖွယ်တွေ.၇လို.နောက်ပိုင်းမှာမိမိအနေနဲ.၇ဲ၇ဲတင်းတင်းသွားလာ၇ဲလာ ပါ တယ်။ထိုင်း၊စင်္ကာပူ၊မလေး၇ှားလိုနိုင်ငံတွေမှာ“ I’m from Myanmar”လို.ပြော၇င် အဲဒီလူမျိုးတွေက သင့်၇ဲ.၇ာထူး၊ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း၊ငွေကြေးသံုးစွဲနိင်မှုအစ၇ှိတဲ.အခြေအနေတွေကြောင့် သင့်ကို ဖော်ေ၇ွပျူဠာစွာဆက်ဆံကောင်းဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့်များစွာသောအဲဒီနိုင်ငံ၇ဲ.လူမျိုးတွေဟာမိမိတို.မြန်မာလူမျိုးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံ့ခြင်တဲ့စိတ်၇ှိတယ်လို.ဆို၇င်မိတ်ဆွေတို.ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါ ဘူး။ထိုင်း၊စင်္ကာပူ၊မလေး၇ှားလိုနိုင်ငံတွေမှာမိမိတို.မြန်မာလူမျိုးတွေကို” foreigner”အဖြစ်မမြင်ပါဘူး။ သူတို.တိုင်းပြည်ကလူမျိုးတွေမလုပ်ခြင်တဲ့အလုပ်ကိုဈေးပေါပေါ၊လခပေါပေါနဲ.အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူ တွေလို.အများအားဖြင့်အထင်မကြီးစွာသတ်မှတ်ကြပါတယ်။
8 April 2012 မှာအင်ဒိုနီး၇ှားနိုင်ငံManado မြို.လေးကိုေ၇ာက်ပါတယ်။Manado မြို.နေလူများစုဟာ ခ၇စ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိမိေ၇ာက်တဲ့အချိန်မှာခ၇စ်ယာန်ဘာသာ၇ဲ.အထိမ်းအ မှတ်ပွဲကာလတစ်ခုဖြစ်လို.အိမ်တိုင်းနီးနီးလို၇ဲ.အေ၇ှ.မှာခ၇စ်ယာန်ဘာသာ၇ဲ.သင်္ကေတလက်ဝါးကပ် တိုင်အထိမ်းအမှတ်ကိုထင်ထင်၇ှား၇ှားမြင်မြင်သာသာချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်။Manado မြို.လေးကနေ ကားနဲ.တစ်နာ၇ီခန်.သွား၇တဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေေ၇ာက်တဲ့အထိလမ်းတစ်လျှောက်အိမ်တွေအေ၇ှ.မှာလဲခ၇စ်ယာန်ဘာသာ၇ဲ.သင်္ကေတလက်ဝါးကပ်တိုင်အထိမ်းအမှတ်ကိုထင်ထင်၇ှား၇ှားမြင်မြင်သာသာချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်။အဲဒီလိုလက်ဝါးကပ်တိုင်အထိမ်းအမှတ်ကိုချိတ်ဆွဲထားကြတဲ့အိမ်ဟာမြို.လုံးကျွတ် နီးပါးလားလို.ထင်၇လောက်အောင်အေ၇အတွက်အားဖြင့်များလှပါတယ်။
မိမိ၇ဲ.မိတ်ဆွေအင်ဒိုနီး၇ှားနိင်ငံသားတစ်၇ုတ်လူမျိုးကိုမိမိကဒီတစ်ခေါက်(Aug 2012)မိမိလာ၇ာမှာ အ၇င်တစ်ခေါက်နဲ.မတူ၊သတိတစ်ထားနဲ.အနေအထိုင်ဆင်ခြင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မိမိမိတ်ဆွေကအင်ဒိုနီး၇ှားလူမျိုးအများစုသည်ဖော်ေ၇ွပြီးကူညီလိုစိတ်၇ှိကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊အနည်းငယ်သောလူ တစ်စု၏လုပ်၇ပ်မမှန်ကန်မှုကြောင့်လူအများကအထင်အမြင်လွဲမှုဖြစ်၇ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။